Horudhac: Chelsea vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Premier League ee ay Reds booqanayso Blues) – Gool FM
(London) 21 Sebt 2019. Kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa markoodii labaad xilli ciyaareedkan kulmaya, iyagoo maqribnimada maanta oo Axad ah isku qabanaya kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo ka dhacaya galbeedka magaalada London.
Reds ayaa booqanaysa garoonka Stamford Bridge halkaasoo ay kula soo dheeleyso kooxda Blues, kulan ka tirsan horyaalka xiisaha leh ee English Premier League.
Wiilasha Jurgen Klopp ayaa kuwa macallin Frank Lampard rigooreyaal ku soo garaacay kulankii UEFA Super Cup ee bishii la soo dhaafay ka dhacay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaddib markii ay ciyaartu ku dhammaatay barbaro 2-2 sagaashanka daqiiqo iyo waqtigii dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey.
Ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee Mason Mount ayaa shaki ku jiraa kulankan, isagoo tijaabo mari doona kaddib markii uu dhaawac canqowga ah uu ka soo gaaray kulankii ay guuldarrada la kulmeen ee Champions League bartamaha isbuucii hore.
N’Golo Kante ayaa tartan ugu jira inuu ka soo muuqdo kulankan, kaddib markii uu tababarka ku soo laabtay, laakiin Emerson Palmieri ayaa markale shaki ku jiraa.
Dhinaca kale Divock Origi ayaysan u badnayn inuu ciyaaro kulankan sida laga soo xigtay macallinka Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp, maadaama uu canqowga ka dhaawacan yahay.
Naby Keita ayaa dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda Reds, halka goolhaye Alisson iyo Nathaniel Clyne ay labaduba sii maqnaan doonaan kulankan, inkastoo ay tallaabo u jiraan inay soo kabsadaan.
>- Chelsea ayaa guul gaartay kaliya hal jeer sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay la ciyaartay Liverpool, waxaana ay kala kulantay 5 barbaro iyo 3 guuldarro, halka mar oo ay garaaceen waa kulankii ay 1-0 uga badiyeen bishii May ee sanadkii 2018-kii, iyagoo guushaas uga mahadcelinaya Olivier Giroud.
>- Kaddib markii ay badiyeen kaliya hal kulan 16-kii kulan ee ugu horeysay oo Premier League ay kula soo ciyaaraan Chelsea meel ka baxsan garoonkooda, waxaana ay kala soo kulmeen 4 barbaro iyo 11 guuldarro, Liverpool ayaa badisay shan ka mid ah 11-kii kulan ee ugu danbeeyay oo ay ku ciyaaraan garoonka Stamford Bridge, waxaana ay ka soo qaateen 5 guul, 3 barbaro iyo 3 guuldarro.
>- Tartammada oo dhan kooxda Chelsea ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso mid ka mid ah 20-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Liverpool, waxaana halkaas kulan oo ay gool dhalin waayeen uu ahaa guuldarro 0-2 oo ay ka soo qaateen garoonka Anfield xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Liverpool ayaa laga badiyay kaliya hal jeer 44-kii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ciyaareen horyaalka Premier League, waxaana ay haystaan 36 guul, 7 barbaro iyo 1 guuldarro, lagamana adkaan oo waa guuldarro la’aan 22-kii kulan ee ugu dambeeyay, waxaana ay heleen 18 guul iyo 4 barbaro, waana rikoorkoodii ugu dheeraa ee taariikhda Premier League, xaqiiqdii Liverpool ayaa markii ugu dambeysay oo 23 kulan aan laga badinin waxay ahayd bishii November sanadkii 1990-kii.
>- Chelsea ayaa la dhibtoonaysa kaliya hal guuldarro 24-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda Stamford Bridge ku ciyaartay, waxaana ay ku haysataa 13 guul, 10 barbaro iyo 1 guuldarro, iyagoo guuldarro ka fogaatay 11-kii kulan ee ugu dambeeyey, waxaana ay heleen kow iyo tobankaas kulan (6 guul iyo 5 barbaro).
>- Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa guuleystay labo ka mid ah afartii kulan ee Premier League uu bannaanka kula soo ciyaaray Chelsea, mana jiro macallin Liverpool ah oo saddex kulan ku soo adkaaday tartankan garoonka Stamford Bridge.
>- Frank Lampard ayaa noqon doona tababarihii 16-aad oo kala duwan ee kooxda Chelsea hoggaaminaya oo horyaalka Premier League kaga horyimaada Naadiga Liverpool, midkoodna macallimiintaas ma badin lixdii kulan ee ugu dambeeyay kulankoodii ugu horreyay ee horyaalka oo ay wajahaan Reds, tan iyo markii uu Carlo Ancelotti sidaas sameeyay bishii October sanadkii 2009-kii.
>- 11-kii gool ee ugu dambeeyey Premier League oo ay Chelsea dhalisay waxaa u dhaliyey xiddigo Ingiriis ah, marka laga reebo goolasha la iska dhaliyey (Own Goals), tani waa rikoorkoodii ugu dheeraa ee wadarta goolal intaas la eg ay u dhaliyaan xiddigo Ingiriis ah, sidoo kale waxay goolal 11 isku xiga dhaliyeen xiddigo Ingiriis ah intii u dhaxeysay bishii September ee sanadkii 1993-kii iyo bishii Janaayo sanadkii 1994-kii.